Ny Fiainantsika sy ny Fanompoana VJ: Fandaharana 4-10 Desambra 2017
Hira 27 sy Vavaka
“Mitadiava An’i Jehovah Dieny Mbola Tsy Tonga ny Andro Fahatezerany”: (10 min.)
[Alefaso ilay video Fampidirana ny Bokin’i Zefania.]
Ze 2:2, 3: Mitadiava an’i Jehovah, katsaho ny fahamarinana, katsaho ny fandeferana (w01 15/2 18-19 § 5-7)
[Alefaso ilay video Fampidirana ny Bokin’i Hagay.]
Ze 1:8: Inona no mila tandremantsika, araka io andininy io? (w07 15/11 11 § 3)
Hg 2:9: Nahoana no be voninahitra kokoa noho ny tempolin’i Solomona ny an’i Zerobabela? (w07 1/12 9 § 1)
Famakiana Baiboly: (4 min. na latsaka) Hg 2:1-14
Omano ny Fitoriana Amin’ity Volana Ity: (15 min.) Fiaraha-midinika. Alefaso tsirairay ireo video misy “fomba fitory modely”, ary iaraho midinika ny hevi-dehibe. Ampirisiho ny mpitory hizara ny Mifohaza! No. 6 2017 amin’ny olona faran’izay betsaka. Tsy tokony havela ao amin’ny trano tsy misy olona anefa ilay gazety, satria tiantsika ny hiresaka mivantana amin’ny olona.
Mampisy Fiadanana sy Firaisan-tsaina ny Fiteny Madio (Ze 3:9): (10 min.) Fiaraha-midinika miorina amin’ny Tilikambo Fiambenana 15 Aogositra 2012, pejy 12, fehintsoratra 4. Alefaso ilay video hoe Mpifahavalo Lasa Mpinamana.
Fianarana Baiboly: (30 min.) kr toko 22 § 8-16
Hira 22 sy Vavaka
Ny Fiainantsika Kristianina sy ny Fanompoana: Fandaharana ho An’​ny 4-​10 Desambra 2017